वडाध्यक्ष लगायत डेढ सयको को’रोना परिक्षण नै नगरि उल्टो रेपोर्ट दिइयो, पुरै गाउँ नै त्रसित
प्रयोगशालाको लापरबाहीका कारण कोरोना परीक्षण नै नगरी रिपोर्ट दिएको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले १ सय ५० जनाको परीक्षण नै नगरी रिपोर्ट दिएको हो । यसरी गलत रिपोर्ट पाउनेमा काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका वडाध्यक्ष राजेन्द्र बुढाथोकीसमेत छन् ।
गएको शुक्रबार नागार्जुन नगरपालिका क्षेत्रका झण्डै ९‍० जनाको स्वाब संकलन गरिएको थियो । यो टोलीमा मेयरदेखि वडाध्यक्षहरुसम्मको स्वाब लिइएको थियो । र, भदौ १४ गते दिनको १ बजे सबैको मोवाइलमा म्यासेज गयो । त्यसमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ थियो ।
कोरोनाको त्रासका बीच नेगेटिभ आएको रिपोर्टले केही राहत मिलेको थियो । र, रिपोर्ट नेगेटिभ आउनसाथ जनप्रतिनिधि कोरोना रोकथामका विभिन्न कामदेखि विकास निर्माणका काममा सहभागी पनि भए । मंगलबार रक्तदान कार्यक्रम नै थियो । कार्यक्रममा मेयर उपमेयरदेखि वडाध्यक्षसम्म गरेर झण्डै ३ सय जनाको उपस्थिति थियो ।
१८० जनाले रक्तदान पनि गरे । सामाजिक दूरीको नियम पालना गर्दै गरिएको कार्यक्रम सफल भएकोमा सबैजना खुशी थिए । तर त्यो खुशी धेरै बेर टिकेन । मंगलबार साँझ ६ बजे नागार्जुन वडा नं ६ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र बुढाथोकीको मोवाइलमा कोरोना पोजिटिभको म्यासेज आयो । र, त्यसले नागार्जुन नगरपालिकालाई त्रासमय बनायो ।
नेगेटिभ रिपोर्ट आयो भनेर सयौं मानिसको सम्पर्कमा गएका वडाध्यक्षको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि यतिबेला त्रासको स्थिति बनेको छ । जनता त्रसित त छँदैछन्, त्यो भन्दा बढी रुस्ट छन् । वडाध्यक्षकै हकमा यस्तो भएपछि नगरपालिका पनि चिन्तित छ ।
यसप्रकारका लापरवाहीले आफ्ना जनताको जीवन धरापमा पारेको उसको बुझाइ छ । तर गलत रिपोर्ट गएको वडाध्यक्षको हकमा मात्र थिएन । वडाध्यक्षसँगै १ सय ५० जनाको स्वाब नै परिक्षण नगरी उक्त दिन रिपोर्ट पठाइएको थियो । र, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गम्भीर त्रुटि भएको स्वीकारेको छ ।
Prevआफ्नै हजुरबुवासँग विहे हुँदा पनि यि नारी किन चुप लागिन ? पुरै पढ्नुहोला
Nextआखिर किन गरियो ट्राफिक प्रहरीमाथि कुटपिट ? यस्तो छ कारण